Tag bilaogy: Tsiambaratelo 5 momba ahy | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 11, 2006 Alahady, Jolay 27, 2014 Douglas Karr
Shel Israel efa nanisy bilaogy ahy tamin'ny bilaogy. Ny lalao dia ny milaza tsiambaratelo dimy momba anao ary avy eo mampifandray olona dimy hafa fantatrao ary avy eo dia mila milaza zavatra dimy mety tsy fantatrao momba azy ireo izy ireo.
Ophidiophobia: Izaho izany. Tsy mahazaka azy ireo! Nihomehy aho fa raha sendra bibilava, dia atsipiko aminy ny zanako ary mihazakazaka mikiakiaka ao anaty vala afaka mamaky vera aho.
Tsy misy na inona na inona amin'ny fiainako hampitaha ny fahasambarana, ny zava-bita ary ny avonavona nofenoin'ny zanako ahy, Billy sy Katie. Tsy misy. (Tsy dia hatsipiko amin'ny bibilava izy ireo, mampanantena aho).
Nampahafantariko tamin'ny fomba vazivazy ny vadiko voalohany ho vadiko voalohany. Tsy fantatro fa tsy ho marina izany.
Halako ny vola. Halako loatra ny vola ka tsy mandanjalanja mihitsy ny bokiko. Raha manana dolara an-tapitrisany aho, dia hanana olana an-tapitrisany dolara fotsiny.
Na dia manana namana an-jatony aza aho dia tsy manana afa-tsy sakaiza iray hatramin'ny fahazazako. Ny namako akaiky indrindra Mike dia mipetraka any Vancouver miaraka amin'ny vadiny mampino, Wendy. Mike dia manana orinasam-pitaovana fanatanjahan-tena ary Wendy dia mpamokatra fahitalavitra sy mpilalao sarimihetsika. Olona tsy mampino izy ireo.
Tags: bilaogy tagdouglas karrmike morozzava-miafinatenifototrawendy russell
Dec 11, 2006 ao amin'ny 8: PM PM
I Wendy, vadin'ny namanao voalohany?
Dec 11, 2006 ao amin'ny 9: PM PM
Wendy no vadin'i Mike voalohany, farany ary tokana! Eny!
Noheveriko fa "tsiambaratelo" momba anao ireo. Na izaho aza mahalala ireo zavatra rehetra ireo. Indrindra ny isa 4 ary mbola mampijaly ahy ihany io.
Mieritreritra aho fa nanokatra kaonty roa hafa aho mba hanadala anao, ry Irlandy! Manantena aho fa hanana vanim-potoana fialantsasatra mahafinaritra ianao sy ny fianakavianao.